RW Ethiopia ayaa cambaareeyay weerarada goobaha wax lagu caabudo ee xalay ka dhacay maamulka Axmarada. | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta RW Ethiopia ayaa cambaareeyay weerarada goobaha wax lagu caabudo ee xalay ka...
RW Ethiopia ayaa cambaareeyay weerarada goobaha wax lagu caabudo ee xalay ka dhacay maamulka Axmarada.
Abiy Ahmed Raiisal wasaaraha Itoobiya ayaa bogiisa Facebook ku qoray, ” Iskudeyga kooxaha xagjirka ah ku duminyaan taariikhda hodanka ah, isu dulqaadka diimaha iyo wada-noolaanshahu meel kuma laha Itoobiyada diirada sareysa barwaaqada.
Wararka laga helayo gobolka Axmarada ayaa sheegaya in ugu yaraan 3 masaajid lagu gubay degmada Mota xalay 7:30 fiidnimo ee xiliga Ethiopia. Waxaa jira xogo tibaaxaya in hal kiinisad la gubay kahor intaa aan masaajidada la holcin.
Gubista masaajidada ayaa kusoo aaday iyada oo wali dalka looga dabaaldagayo dayax-gacmeedkii ugu horeeyay ee Ethiopia hawada u dirto oo shalay laga galay Shiinaha. Dhacdadan ayaa u muuqatay mid mideysay wadanka oo goob kasta laga soo dhoweeyay.
Dawlada Abiy ayaa lagu amaanay furfurnaanta siyasadeed, sii deynta maxaabiistii siyasadeed, xoriyada hadalka, ururadii laga saaray liiska argagixisada iyo heshiiskii nabada ee Eritrea.
Xukuumada, ayaa dhanka kale, lagu dhaliila inayna wax weyn ka qaban qulqulatooyinka qowmiga ah iyo rabshadaha salka ku haya diimaha kuwaas oo amaanka iyo kala danbeynta halis ku ah.
Abiy ayaa tibaaxay in falkani yahay mid fulaynimo wuxuuna ugu baaqay dadweynaha nabada jecel inay diidaan falalka lagu kala qaybinayo islamarkaana ixtiramaan wada noolaanshaha.
Qulqulatooyinka ka jira wadanka, gaar ahaan kuwa bilihii ugu danbeeyay ka dhacay maamulada Axmarada iyo Oromada, ayaa madax xanuun ku ah ra’isulwasaaraha iyo dawladiisa.